Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland Marwo Hinda jaamac xirsi Gaani ayaa habeenimadi xalay casho sharaf ku maamuustay madaxii haayada world vision mrs Madeleine. – MESAF
News & Events News Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland Marwo Hinda jaamac xirsi Gaani ayaa habeenimadi xalay casho sharaf ku maamuustay madaxii haayada world vision mrs Madeleine.
Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland Marwo Hinda jaamac xirsi Gaani ayaa habeenimadi xalay casho sharaf ku maamuustay madaxii haayada world vision mrs Madeleine.
Marwo Hinda jaamac xirsi Gaani wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaliland ayaa habeenimadi xalay casho sharaf ku maamuustay madaxi haayada caalamiga ah ee world vision mrs Madeleine.
Waxaana madashaas goob joog ka ahaa saraakiil ka socota wasaarada iyo xubno kamida shaqaalaha haayada.
Wasiirka ayaa uga mahad celisay hanaankii shaqo ee wanaagsana ee ka dhaxeeyey mudadii ay maamulka haysay mrs Madeleine.
Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta qabatay shirka isla xisaabtanka waaxyaha kala duwan ee wasaaradda. Waxaana shirka gadhwadeen ka ahaa wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda.